Inkampani yolungelelwaniso yanikwa isihloko seshishini elihlawula irhafu eShanghai. Oku kukuqinisekiswa kwetekhnoloji ye-CORBITION, kodwa kunye nokubuyela kwabo bonke abasebenzi be-CORBITION eluntwini. Kwixesha le-8 elidlulileyo i-China (i-Shanghai) iTeknoloji yeLizwe yeTekhnoloji yokuThengisa kunye nokuThumela ngaphandle, iimveliso zethu ziye zamkelwa ngumgangatho womoya waseTshayina nobugcisa wodliwanondlebe kunye neengxelo. Kulo mboniso, i-CORBITION ibonise i-36-bit kunye ne-48-bit ye-nucleic acid, kunye noluhlu lwezinto ezisetyenziswayo zonyango ezinje ngekholamu ye-asidi yokuhlanjululwa, ipleyiti enzulu, ipleyiti ye-PCR, umkhono we-magnetic bar, njl. ikakhulu ikhuthaza izixhobo zokukhupha i-asidi ye-acid, eneempawu zokusebenza okulula, ukuthuthwa okufanelekileyo, indawo encinci yokuhlala, njl., Kwaye kwazisa uthotho lwamanyathelo okukhetha. Ngalo mboniso, hayi ukubonisa iimveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kuphela, kodwa nokwazisa umfanekiso wenkampani yethu, sincede inkampani YOKUGQIBELA yophuhliso lwexesha elide. Le nkampani yomboniso ukwandisa umbono, ingqondo evulekileyo, ukufunda okuphambili, ukutshintshiselana kunye nentsebenziswano, uwusebenzise ngokupheleleyo lo mboniso, ngokuthatha inxaxheba kwabathengi kunye nabathengisi ukunxibelelana, ukunxibelelana, ukubonisana, ukuqhubela phambili ukuphucula ukubonakala kwenkampani kunye nefuthe, kodwa nokuqhubela phambili. ukuqonda iimpawu kwiimveliso zontanga ezihambele phambili, ukuze uphucule ubume beemveliso zabo, badlale izinto zabo eziluncedo. Ngalo mboniso sizuze lukhulu, siya kuqhubeka nokusebenza nzima, sazise abantu abaninzi ngophawu lwethu.
Ukulwa ubhubhane luxanduva lomntu wonke
Ngokwanda kwe-COVID-19 ubhubhane kuthintelo kunye namanyathelo olawulo e-China, iKhomishini yezeMpilo yeSizwe iyalele ukuba iinzame eziqhelekileyo zokuhlola i-acid kunye nobubanzi bokubona kufuneka bonyuswe ngokuqhubekekayo, kwaye zonke iimvavanyo kufuneka kwaye zikulungele ukuvavanywa kufuneka zivavanywe. Ngokumiliselwa komyalelo, iilebhu zePCR zobungcali zisekwe kwizixeko ezahlukahlukeneyo zokuthintela kunye nokulawula i-COVID-19 ukusukela ngo-2020. Ngokufika kancinci kwezixhobo ze-PCR, iingxaki ezinjengokubonakala kwamandla kubasebenzi kwezinye iidolophu ziye zabhencwa. .
Umlawuli weSebe leLebhu leSibhedlele i-Peking Union Medical College, wathi kudliwanondlebe ekupheleni kuka-2020: “Kweminye imimandla, ii-PCR detectors kunye nee-nucleic acid extractors zikhona, kwaye kwaneelebhu ze-PCR sele zimisiwe. Kodwa ke, eyona nto ibalulekileyo kukuqeqesha abasebenzi kwezobuchwephetsha abanokumelana nalo bhubhane. ” Ngaba ibalulekile loo nto.
Kungekudala, abanye abasebenzi belebhu abancedisa uXinjiang noHebei bakwathi, ukongeza ekugqibeni imisebenzi yokuvavanywa kweasidi ye-asidi, ukufundisa abasebenzi baselebhu basebenza ngobuchule izixhobo zePCR ikwayinxalenye yomsebenzi wokuxhasa. Ke, ngokufika kwelabhoratri ye-PCR, ukusebenza kwezakhono kwezixhobo ze-PCR sisiqinisekiso esisisiseko sokwandisa umthamo welabhoratri ye-PCR.
Njengolona hlobo lubalulekileyo lokuchongwa kwe-acid ye-acid kubhubhane we-COVID-19 e-China, i-CHM065 real-time fluorescence ye-PCR yesixhobo seCorbition iye yamkelwa yathengwa ziilabhoratri ezininzi ze-PCR. Kwaye ngenxa yokusebenza kwayo ngokugqwesileyo, ukusebenza ngokulula, ukusetyenziswa ngokulula kunye nokuvavanywa kokusebenza okuphezulu, kunye nokusebenza kwayo kwi-Intanethi, ngaphandle kwamathandabuzo kukhethwe ngabasebenzi abafundisayo njengemodeli yokufundisa ye-PCR, kuzo zonke iindawo ilizwe, kunye nehlabathi ukuba lenze uxanduva olunzima lokuqeqesha iinqwelomoya.